विश्वास गर्नु क’ठिन तर सत्य: कुनै बेला विश्वकै चौथो ठूलो समुद्र अहिले मरुभूमिमा परिणत ! (भिडियो)::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
विश्वास गर्नु क’ठिन तर सत्य: कुनै बेला विश्वकै चौथो ठूलो समुद्र अहिले मरुभूमिमा परिणत ! (भिडियो)
अथाह पानीको वर्णन गर्नुपर्दा हामी समुद्रलाई सम्झन्छौं । समुद्र अर्थात् अथाह पानीको भण्डार । यस्तो भण्डार पनि रित्तिन्छ भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । तर त्यही समुद्र सुकेर मरुभूमिमा परिणत हुन पनि बेर लाग्दो रहेनछ । उज्वेकिस्तान र कजाखस्तानबीचको अरल सागरको वर्तमान स्वरुप हेर्ने हो भने जो कोही चकित हुनु स्वाभाविक हो ।
यो सागरको ९० प्रतिशत हिस्सा अहिले मरुभूमिमा परिणत भइसकेको छ । कुनै बेला यो समुद्रलाई विश्वकै चौथो ठूलो समुद्र मानिन्थ्यो ।
तर पाँच दशकै यसले आफ्नो त्यो परिचय गुमाइसकेको छ । अर्थात् विगत पाँच दशकमा यो समुद्रको ९० प्रतिशत हिस्सा सुकिसकेको छ ।अरल सागर सुकेको घटना जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो प्रभावका रुपमा लिइन्छ । सन् १९६० देखि यो समुद्र सुक्ने क्रम सुरु भएको हो । सन् १९९७ सम्म आइपुग्दा यो समुद्रको आकार खुम्चिदैं चारवटा तालमा परिणत भयो ।
यसको चारभागलाई अहिले उत्तरी अरल सागर, दक्षिणी अरल सागर, पूर्वी बेसिन र पश्चिमी बेसिन भनेर चिनिन्छ । सन् २००९ मा आइपुग्दा सागरको दक्षिणपूर्वी हिस्सा पूर्ण रुपमा सुक्यो भने दक्षिणपश्चिमी हिस्सामा पनि निकै कममात्र पानी रह्यो ।सागर सुकेका कारण यस क्षेत्रमा माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने ठूलो जनसंख्या आर्थिक संकटमा पर्नुका साथै बेरोजगारी र मुलुकलाई नै आर्थिक संकटमा धकेल्यो ।
जानकारहरुका अनुसार तत्कालिन सोभियत संघको एउटा परियोजनाका कारण यो सागर संकटमा परेको हो । सन् १९६० मा सोभियत संघको सिंचाई परियोजनाका लागि विभिन्न नदीहरुको बहाव मोडियो । त्यसपछि समुद्रमा आउने पानीको स्रोत घट्न गई समुद्र सुक्ने क्रम सुरु भएको हो । यो सागरलाई जोगाउन अहिले कजाखस्तानले केही प्रयास गरे पनि त्यति सार्थक हुन सकिरहेको छैन ।
कोरोनाको डरले प्लास्टिकको गोलोभित्र बसेर सामान किन्न गइन् यी महिला (भिडियो)
कोरोनाले पूरै देश आ’तंकित भइरहेका बेला मन भुलाउन सित्तैमा पो’र्न भिडियो सेवा!
यौ’न साथी खोजिदिने मोबाइल एप
सिक्का बटुलेर ११ हजारको बिजुली बिल तिर्दा यस्तो हंगामा !
प्रेमिका खोज्न २ हजार किमी यात्रा !